Gen.Muxidiin oo qarax ka badbaadey 11 Feb 11, 2013 - 11:07:09 PM
Taliye ku xigeenka booliska Puntland Gen.Muxidiin Axmed Muuse ayaa goor dhoweyd saaka 11 February,2013 magaalada Galkacayo waxa uu ka badbaadey qarax lala beegtey gaarigiisa kadib markii naftii hure uu gaari laga soo buuxshey walxaha qaraxa beegsadey gaariga taliyaha.
Ilaa iyo hadda saddex asakri oo ka mida ilaaladiisa ayaa la xaqiijiyey dhaawacooda ,waxana GO ilo wareedyo u raaciyeen in dhaawac fudud uu soo garay taliyaha.
Qaraxan ayaa ka dhacay agagaarka Taliska Booliska Mudug waxana loo adeegsadey Gaari nooca Mark 2 loo yaqaaan oo laga soo buuxshey walxaha qarxa iyadoona naftii hurihii waday uu ku dhintey.
Goobta waxa ku sugan haatan ciidamada amaanka Puntland oo wada baaritaano ku saabsan qaraxa iyo gaariga loo adeegsadey,waxana Isbitalka la geeyey dhaawacii uu ka mid yahay taliye Muxidiin oo xaaladiisa caafimaad ay wanagsantahay.
Garowe Online wararkeena danbe kala soco faahfaahinta Qaraxan iyo codadka masuuliyinta Booliska.